जीवनशैली Archives - Page3of3- Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
न्यायको खोजीमा कृष्णलक्ष्मी
शब्द/तस्बिर: मन्दिरा बस्नेत दोलखा, पुस २१/कृष्णलक्ष्मी खत्री अहिले उमेरले ७३ भइन् । उनको घर भीमेश्वर नगरपालिका ८ माटी हो । अहिले भीनपा १ कृषिबजारमा बस्छिन् । उनी आफ्नै परिवारबाट पीडित महिला हुन् । खत्रीका अनुसार उनका छोराछोरी छैनन् । छोराछोरी नभएको भन्दै पति कृष्णबहादुरले दोस्रो विहे गरे । बिहे गरेको ३६ बर्षपछि पतिको मृत्यु भयो
मैले पढेको क्रुसमा गरीव : एक समीक्षा
आर. के. विशेषत समाजवादी साहित्यमा विशेष अभिरुचि राख्नुहुने कथाकार ढुंगेल समाजका तिता र यथार्थ विषयवस्तुहरुलाइ आफ्ना लेख रचनामा उतार गर्नमा पोख्त हुनुहुन्छ । नेपाली समाज, संस्कार र संस्कृतीलाइ नजिकवाट नियाल्दै त्यहि समाजको तितोसत्यलाइ कोट्याउदै समाजको भ्रम र यथार्थलाइ आफ्ना लेखरचनाहरुमा लिपिवद्ध गर्ने एवं समाज रुपान्तरणको वाटोमा लागिरहने कथाकारले वर्तमान समाजलाइ आदर्श समाज निर्माणका लागि
१०. जोसेफ इस्ट्राडा (फिलिपिन्सका पुर्व राष्ट्रपति) फिल्मी करिअरमा सफलता नमिलेपछि राजनीतिमा लागेका थिए जोसेफ इस्ट्राडा । भुमीहिन जनताहरुको बारेमा वकालत गरी आफ्नो चुनावी क्याम्पिन अगाडि बढाएका उनलाई जनताले देशको पक्षमा काम गर्ने नेता ठानेर राष्ट्रपतिमा विजय गराए । तर, इस्ट्राडाले जनताको त्यो विश्वासलाई देशको पक्षमा होइन, व्यक्तिगत उन्नतिमा उपयोग गरे । बिस्तारै उनको भित्री कुरा
नेविसंघमा देउवा र गगन-प्रदिपको संयुक्त प्यानल घोषणा
३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघको नयाँ नेतृत्वका लागि शेरबहादुर देउवा र गगन थापा-प्रदिप पौडेल समूहले संयुक्त प्यानल घोषणा गरेका छन् । रामचन्द्र पौडेल समूहको विरोधका कारण मनोनयन दर्ता प्रक्रिया लम्बिएको छ । र, साँझ ६ बजेसम्म समय तोकिएको छ । साथै सहमतिको प्रयास चलिरहेको छ । यसबीचमा देउवा र गगन-प्रदिप समूहले संयुक्त प्यानलको
क्यान्सरदेखि कपाल फुल्नेसम्म करिब ५० रोग ठीक पार्ने साग
सागसब्जीमा बेथे ‘चौलाई’ (एक प्रकारको तरकारी )को छुट्टै स्थान छ । दुनियाँभरका मानिस यसको उपयोग तरकारी र खानाका रुपमा स्वास्थ्य लाभका रुपमा गर्छन् । यो अनेकौ औषधीय गुणहरुले भरिएको हुन्छ । बेथे(एक प्रकारको तरकारी) दुई किसिमका हुन्छ, एक सामान्य हरियो पात भएको र अर्काे रातो पात भएको हुन्छ । यसले खोकी लाग्ने समस्या र पित्तको
तपाईको इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने विधि
समाजमा छोरा या छोरी नजन्मिएकै कारण कैयौ परिवारमा द्वन्द्व हुने गर्दछन् । यसकै कारण कयै महिलाले मानसिक र शारिरीक यातना भोगिरहेका घट्नाहरु छन् । कतिपय महिलाले यसैको कारण सौता त कतिपयले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेका घटनाहरु भेटिन्छन् । कोही भने सन्तान प्राप्तीका लागि भएभरका अस्पताल, बैद्य, मठ–मन्दिर र तीर्थस्थलमा पुगेर सास्ती बेहोरिरहनु भएको त छैन
‘दर्पणछाया २’ बन्ने’
‘दर्पणछाया’ धेरैले मन पराएको फिल्ममा पर्छ । नाम लिँदै कतिपयको मानसपटलमा दृष्टिविहीन बनेका उत्तम प्रधानदेखि दिलीप रायमाझी र निरुता सिंहबीचको त्रिकोणात्मक प्रेमकथा नाच्न थाल्छ । सोही फिल्मका निर्देशक तुलसी घिमिरे यति बेला ‘दर्पणछाया २’ का लागि भिडिरहेका छन् । तुलसीले राजधानीमा सोमबार नयाँ फिल्मको घोषणा गरे । ‘दर्पणछाया’ का तीन मुख्य कलाकार भने दोहोरिनेछैनन् ।